अर्जेन्टिना चिलीलाई हराउँदै कोपा अमेरिका कपको तेस्रो, मेस्सीलाई १४ वर्षपछि दोस्रो रातो कार्ड
यो मेस्सीको फुटबल जीवनको दोस्रो रातो कार्ड हो। उनले पहिलो रातो कार्ड सन् २००५ मा आफ्नो डेब्यु खेलमा हंगेरीविरुद्द १४ वर्ष अगाडि पाएका थिए।
फोटो: कोपा अमेरिका ब्राजिल
काठमाडौँ। ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका कपको तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा साबिक विजेता चिलीलाई २–१ ले हराउँदै साबिक उपविजेता अर्जेन्टिनाले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ ।
पहिलो हाफको २२ मिनेट भित्रै अर्जेन्टिना २-० ले अगाडि थियो। खेलको १२औं मिनेटमा सर्जियो अगुएरोको गोलबाट उसले अग्रता लिएको थियो । सो गोलमा कप्तान मेस्सीको पासमा सम्भव भएको थियो । अर्को गोल भने खेलको २२औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाका लागि पाउलो डिबालाले दोस्रो गोल गरेपछि अर्जेन्टिनाले खेलमा २–० को सहज अग्रता बनाएको थियो ।
खेलको ३७औं मिनेटमा पुगेपछि भने खेल एकाएक तनावग्रस्त हुन् पुग्यो जुन बेला दुई टिमका कप्तानहरु लिओनल मेस्सी र ग्यारी मेडेलले एकसाथ रातो कार्ड पाएका थिए । चिलीको डी-बक्स क्षेत्रमा चिलियन कप्तान मेडेलले मेस्सीबाट बल क्लियर गर्नेक्रममा दुई खेलाडीबीच हलुका ट्याकल भएर बल लाइनबाहिर गएको थियो । तर, त्यसपछि मेडेलले रिसाउँदै फर्किएर मेस्सीलाई छातीले पटक-पटक धक्का दिन्छन् । मेस्सीले पनि जवाफमा छातीले नै धक्का दिन्छन् । सोक्रम बढ्छ । र, अवस्थाले थप उग्र रूप लिन्छ । त्यसपछि रेफ्रीले दुवै खेलाडीलाई रातो कार्ड दिएर मैदानबाट निकाल्छन् ।
यो मेस्सीको फुटबल जीवनको दोस्रो रातो कार्ड हो। उनले पहिलो रातो कार्ड सन् २००५ मा आफ्नो डेब्यु खेलमा हंगेरीविरुद्द १४ वर्ष अगाडि पाएका थिए। मेस्सीले त्यसपछि हिजोको खेल अघिसम्म क्लब र देशको लागि त्यसपछि निरन्तर खेल्दा कुन पनि खेलमा रातो कार्ड पाएका थिएनन्।
नौ वटा कार्ड प्रयोग गरिएको खेलमा दुई रातो कार्ड र सात पहेंलो कार्डको वर्षा भएको थियो। खेलमा चिलीले खेलको ५९औं मिनेटमा पेनाल्टी पायो । जसमा अर्टुरो भिडालले सहजै गोल गरेर खेल २–१ को स्थितिमा ल्याएका थिए।
तर निर्धारित ९० मिनेट र इन्जुरी ६ मिनेटको समयमा थप गोल हुन् सकेन र खेल अर्जेन्टिनाले २–१ ले जित्यो । यो जितसँगै अर्जेन्टिना यस संस्करणको तेस्रो टिम बन्यो । खेलको ''म्यान अफ दि म्याच'' अर्जेन्टिनाका पाउलो डिबाला बने।
Premiación selección Argentina #CopaAmérica Brasil 2019. ???? ???????????? pic.twitter.com/Q11p62Nhvz
फोटो: कोपा अमेरिका ब्राजिल र गोल डटकम